प्रदेश २ को मुख्यमन्त्रीमाको नियुक्त होलान् ? तीन नेताको आ-आफ्नै दाबी « News24 : Premium News Channel
प्रदेश २ को मुख्यमन्त्रीमाको नियुक्त होलान् ? तीन नेताको आ-आफ्नै दाबी
जनकपुर ।प्रदेशसभा सदस्यहरुको सपथ लगतै प्रदेश प्रमुख रत्नेश्वरलाल कायश्थले पहिलो बैठक आहृवान गरेका छन् । प्रदेशसभाको पहिलो बैठक माघ २१ का लागि निर्णय भएको छ । संघीय फोरम र राजपामा प्रदेशका मुख्यमन्त्री र सभामुखको को बन्ने भन्ने बिषयले चर्चा पाएको छ ।
प्रदेश २ मा फोरम र राजपा गठबन्धनको बहुमत छ । ठूलो दल फोरमले मुख्यमन्त्री लिने लगभग पक्का छ, यद्यपि राजपाको पनि दाबी छ । फोरमको प्रदेश २ प्रमुख रेणु यादवले भनिन्, ‘मुख्यमन्त्री हामी लिन्छौं, व्यक्तिका बारेमा छलफल हुन बाँकी छ ।’
कुल १०७ सदस्यीय प्रदेशसभामा फोरमले प्रत्यक्षतर्फ २० र समानुपातिक ९ गरी २९ सिट जितेको छ । राजपाले १५ प्रत्यक्षसहित २५ सिट जितेको छ ।
मुख्यमन्त्रीका लागि ५४ मत चाहिन्छ । जबकि राजपा र फोरमको मात्रै जोड्दा ६९ मत पुग्छ ।
कोको छन् मुख्यमन्त्रीका दाबेदार ?
प्रदेश २ को मुख्यमन्त्रीका लागि तीन नेताको दाबी रहेको फोरमका नेताहरु बताउँछन् ।
लालबाबु राउतः पार्टी उपाध्यक्ष राउत पर्सा १ ख बाट निर्वाचित भएका छन् । पूर्वसभासदसमेत रहेका उनी मुख्यमन्त्रीको दाबीसहित प्रदेशमा झरेका हुन् । पार्टीले जिम्मेवारी दिए आफू तयार रहेको उनले बताउने गरेका छन् ।
विजय यादवः सिरहा २ कबाट निर्वाचित उनी फोरमको कोषाध्यक्ष पनि हुन् । पहिलो संविधाानसभामा सिरहा ३ बाट प्रत्यक्ष निर्वाचित यादव मन्त्री पनि बनेका थिए ।
शैलेन्द्र साहः सप्तरी २ को खबाट प्रदेशसभा सदस्यमा निर्वाचित साह संघीय समाजवादी फोरमको केन्द्रीय समिति र राजनीतिक समिति सदस्य हुन् ।
फोरम नेताहरु यिनै तीन जनामध्ये एक मुख्यमन्त्री बन्ने स्वीकार गर्छन् । तर, उनीहरुको एकको नाम लिन चाहँदैनन् । तर, सम्भावना विजय यादवको बढी देखिएको केही नेताहरुको तर्क छ ।
संघीय फोरममा यादवहरुको बाहुल्य छ । पार्टीले पाएको मतमा धेरै त्यही समुदायको भएकाले विजय यादवलाई मुख्यमन्त्री बनाउनुपर्ने लबिङ बलियो छ ।
पार्टी अध्यक्ष उपेन्द्र यादव र प्रदेश प्रमुख रेणु यादवले मुख्यमन्त्रीबारे मुख खोलेका छैनन् । तर, रेणु यादव विजयलाई अघि सार्ने मुडमा देखिएको एक नेताले बताए ।